Bancc™️ - बूम, बाम, Bancc!
मान्यकर्ता र सिर्जनाकर्ताहरू
मान्यकर्ता आवेदन (N/A)
Bancc™️ ले अर्को टु-गो प्लेटफर्म सिर्जना गर्दैछ शताब्दीको अर्को FinTech यात्रामा हामीसँग सामेल हुनुहोस्। जनताका लागि, जनताद्वारा । Whitepaper एक्सचेन्ज गर्नुहोस् र ०% शुल्कको साथ क्रिप्टो किन्नुहोस् BanccDex™️ एक विकेन्द्रीकृत एक्सचेन्ज/एग्रीगेटर हो जसले Binance स्मार्ट चेन (BSC), Ethereum (ETH) र बहुभुज नेटवर्कमा एउटै एप्लिकेसनमा सबै विभिन्न स्वैपहरू सङ्कलन गर्दछ। एप लन्च गर्नुहोस् कागजात BanccStaking™️ मा 500% APY सम्म कमाउनुहोस् BanccStaking™ एक स्ट्याकिंग प्लेटफर्म हो जसले विभिन्न भल्ट बिटा, अल्फा, ओमेगा र भल्हल्ला प्रदान गर्दछ। एप लन्च गर्नुहोस् कागजात BanccDAO™️ समुदायलाई एक पटकको लागि परिवर्तन गर्न प्रोत्साहित गर्दै BanccDAO™️ एक विकेन्द्रीकृत शासन भोटिङ अनुप्रयोग हो Bancc ™ ️ समुदायका लागि प्रस्तावहरू आपूर्ति गर्न र कति प्रस्ताव चाहिन्छ भनेर मापन प्राप्त गर्न। एप लन्च गर्नुहोस् कागजात सहयोगमा रुचि छ? आज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी दुबै पक्षहरूको लागि लाभदायक हुने कुरालाई क्रमबद्ध गर्नेछौं हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस कागजात
बूम, बाम, बैंक...⚡️
Bancc एक ब्लकचेन कम्पनी हो जसले ब्लकचेन सम्भावनाहरू सहित अवस्थित प्रविधिहरू बीचको खाडललाई पूरा गरेर अर्को विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्लेटफर्म सिर्जना गर्न यात्रा गरिरहेको छ।
यहाँ sBanc किन्नुहोस्!
शीर्ष मिडिया आउटलेटहरूले हामीलाई चिन्छन्
तपाईले हामीलाई यहाँबाट चिन्न सक्नुहुन्छ...
एक पटक एक कदम
निर्माणमा तीन वर्ष
Bancc इकोसिस्टम सुविधाहरू
विश्वव्यापी र क्रिप्टोकरेन्सी बजार महँगो र प्रयोग गर्न ढिलो हुने वित्तीय विकल्पहरूमा सीमित छ। ठूलो बजार छोडेर अछुतो छोडियो। राम्रो विकल्पहरूको लागि छोटो भएकोले, हामी अहिले सम्म अड्किएका छौं ...
हाम्रो प्रयोग गर्न सजिलो एप प्रयोग गरेर 1 सेकेन्ड भित्र विश्वव्यापी पैसा पठाउनुहोस्
हाम्रो प्रयोग गर्न सजिलो एप संग सजिलै संग आफ्नो मनपर्ने cryptocurrency व्यापार गर्नुहोस्
आफ्नो डेबिट/क्रेडिट BancCard™️ मार्फत भुक्तान गर्नुहोस् वा क्रिप्टोकरेन्सी वालेटबाट सिधै भुक्तानी गर्नुहोस्। तपाईंको पैसा, तपाईंको छनौट
Bancc™️ मार्केटप्लेसको साथ केहि क्लिकहरूमा आफ्नो अनलाइन स्टोर सेटअप गर्नुहोस्
Bancc™️ उत्पादन र सेवाहरू
BanccSwap™️ बैंक टोकनको आगामी जोडीहरू जस्तै BUSD, USDT, WBNB को लागि तरलता निर्माण गर्न वा Binance स्मार्ट चेन इकोसिस्टममा कुनै पनि टोकनमा तरलता प्रदान गर्न लेखापरीक्षण गरिएको स्मार्ट अनुबंधहरूसँग विकेन्द्रीकृत विनिमय हो।
BanccYield™️ एक विकेन्द्रीकृत उपज खेती प्लेटफर्म हो तपाईलाई सजिलो र प्रोत्साहनजनक तरिकामा sBanc खेती गर्न। जोडी मध्ये एक प्रदान गर्नुहोस् र sBanc मा पुरस्कृत गर्नुहोस्।
BanccCEX™️ एक केन्द्रीकृत एक्सचेन्ज हो जहाँ तपाईं Bitcoin, Ethereum, Dash आदि जस्ता अन्य क्रिप्टोकरन्सीहरूको ठूलो तरलता ब्याकिङका साथ 160+ जोडी सम्म व्यापार गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। BanccCEX™️ Bancc™️ इकोसिस्टममा एउटा महत्त्वपूर्ण उत्पादन हो र यसले प्रस्ताव मात्र गर्दैन। व्यापारिक क्षमताहरू तर प्रयोगकर्ताहरूलाई कमाउनको लागि उधारो/उधारो विकल्पहरू पनि।
BanccAccount™️ तपाईंको फिएट र क्रिप्टोकरेन्सी सम्पत्तिहरूको सिंहावलोकन गर्नको लागि तपाईंको व्यक्तिगत खाता हो। आफ्नो BancCard™️ अर्डर गर्नुहोस् र सबै लेनदेनहरूमा शुल्कहरू बचत गर्न थाल्नुहोस् जब तपाईंले BancChain™️ मा आफ्ना टोकनहरू राख्नुभएको छ।
BanccNFT™️ NFT को एक विशेष र सीमित भाग हुनेछ प्रयोगकर्ताहरूका लागि तिनीहरूको हात प्राप्त गर्न जसमा प्रत्येक विशिष्ट NFT को लागि डिजाइन विशेषताहरूको फरक सेट हुनेछ। सुविधाहरू ट्रेडिङको लागि कुनै शुल्क नलाग्ने आगामी डेबिट कार्डहरूको प्रि-अर्डरको लाइनहरू बीचमा हुनेछन्।
BanccPay™️ fiat मुद्रा र cryptocurrencies को लागि भुक्तानी गेटवे हो। सबैलाई भिसा, मास्टरकार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस आदि सबै ठाउँमा स्वीकार गर्नुहोस् र यसलाई स्वचालित रूपमा BanccCex™️ मार्फत fiat वा cryptocurrency मा स्थानान्तरण गर्नुहोस्।
BanccMerchant™️ कुनै पनि व्यापारीलाई अनलाइन र अफलाइन दुबैमा आफ्नो उत्पादन/सेवाहरू स्वीकार गर्न र बेच्न सुरु गर्न लचिलोपन र सजिलो स्केलेबिलिटी प्रदान गर्ने पूर्ण रूपमा विकसित पोइन्ट-अफ-सेल प्रणाली हो।
अन्तरक्रियात्मक र स्केलेबल
बिजुली गति र प्रति सेकेन्ड 10,000 लेनदेन मा लेनदेन
दौडिएर $BANC कमाउनुहोस्
एक BancChain™️ प्रमाणिकरणकर्ता
CEFI र DEFI
तपाईंको सिक्का, तपाईंको अवसरहरू
१००+ भन्दा बढी सम्पत्ति क्रस-चेनसँग स्वैप गर्नुहोस्
सरल उपायहरू बनाउँदै
प्रयोगकर्ता मैत्री जो कोहीको लागि बनाइएको
हाम्रो मुख्य विश्वासहरू मध्ये एक हो कि प्रत्येक क्रिप्टो सिक्का/टोकनमा उपयोगिता हुनुपर्छ। धेरै परियोजनाहरूले त्यो भाग छुटाउँछन् तर हामी गर्दैनौं। $BANCC लाई वास्तविक संसारको समस्या समाधान गर्न हाम्रो प्लेटफर्म प्रयोग गरिनेछ र यसले हामीलाई फरक बनाउँछ।
प्रयोगकर्ताले स्वचालित रूपमा Bancc खरिद गर्दछ।
प्रयोगकर्ताहरूले खरिद गरेको पठाउँछन्
चाहिएको प्रयोगकर्तालाई $Banc
FIAT वा क्रिप्टो
प्रयोगकर्ताहरूले ब्याङ्क प्राप्त गर्छन् र कुनै पनि फिएट वा क्रिप्टोमा विनिमय गर्न सक्छन्
तिनीहरू म्यानुअल वा स्वचालित रूपमा रुचाउँछन्।
सरल र परिष्कृत
दृष्टि निर्माण भयो
प्रारम्भिक विचार सिर्जना गरियो। हामी एउटा उत्पादन सिर्जना गर्न चाहन्थ्यौं जसले क्रस बोर्डर भुक्तानीहरू छिटो, सजिलो र बजारमा न्यूनतम शुल्कहरू सक्षम पार्छ। अनुसन्धानले निष्कर्ष निकाल्यो कि हालका प्रदायकहरूले सेवाहरू प्रदान गर्दछ जुन पुरानो, अविश्वसनीय र प्रयोगकर्ताहरूको लागि उच्च लागत हो। हामी निष्कर्षमा पुग्यौं कि केहि राम्रो प्रदान गर्न को लागी हामी एक विशिष्ट सामाजिक आर्थिक वर्ग को लागी विशेष हुन सक्दैनौं। हामीले अपडेट गर्ने र परिमार्जन गर्ने निर्णय गर्यौं जसलाई हामी अहिले "प्लेटफर्म" भन्छौं।
$50K बीज राउन्ड उठाइयो
हामीले $ 50K बीज राउन्डको साथ सफल भयौं र प्लेटफर्मको विकास सुरु गर्न केही थप पैसा पायौं। 2021 को अन्तमा हामीले एक अन्तरक्रियात्मक, प्रभावकारी र ब्लकचेन सहित सिर्जना गर्न आवश्यक भएको टेक्नोलोजीलाई पुन: ब्रान्ड र अद्यावधिक गर्‍यौं।
✅ - Binance स्मार्ट चेन (PinkSale) मा सार्वजनिक बिक्री
✅ - बैंकिङ र क्रिप्टोवालेट
🚀- विशाल मार्केटिङ अभियान (चलिरहेको)
⚡️- BanccCEX™️ (केन्द्रीकृत विनिमय)
⚡️- इथरियम भर्चुअल मेसिन अनुकूलता
⚡️- क्रसचेन स्वैप
⚡️- भुक्तानी गेटवे
❇️ – थप आगामी…
⚡️- बिन्दु-अफ-सेल प्रणाली
⚡️- एउटै एप्लिकेसनमा माथिका सबै उत्पादनहरू सहितको अन्तिम प्लेटफर्म
Bancc को बारेमा
हामी क्रिप्टो मुख्यधारा बन्ने कारण हौं। भुक्तान उद्योगको गल्ती विगतको सम्झना हुन लागेको छ। यो क्रिप्टोको लागि समय हो जुन क्रिप्टो गर्न डिजाइन गरिएको थियो - वास्तविक विश्व समस्याहरू समाधान गर्नुहोस्। हाम्रो $BANCC सिक्का र यससँग आउने सबै सुविधाहरू - हामी भुक्तानी उद्योगको भविष्य हौं भन्ने विश्वास गर्छौं र हामी तपाईंलाई यात्रामा निमन्त्रणा गर्दैछौं।
संस्थापक र मुख्य प्रविधि अधिकारी
13 वर्षको उमेरदेखि क्रिप्टो स्पेसमा थिए र 14 वर्षको उमेरमा बेन्जामिनसँग आफ्नो पहिलो व्यवसाय सिर्जना गरे, वेबसाइटहरू र एपहरू निर्माण गरे। उनीसँग ब्लकचेन विकास, अर्थशास्त्र र उन्नत प्रविधि निर्माणको लागि पूर्वाधारको लागि सबैभन्दा प्राविधिक र आलोचनात्मक ज्ञान छ। उहाँ बैंकको सफलताको निर्माणको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुहुन्छ।
बेन्जामिन हाल एक पेशेवर खेलाडी र सम्पत्ति, स्टक र क्रिप्टोमा लगानीकर्ता हुन्। बेन्जामिन अनलाइन क्रिप्टो क्यासिनोमा कनिष्ठ साझेदार हो। बेन्जामिनले निल्स-जुलियससँग 15 वर्षको उमेरमा आफ्नो पहिलो कम्पनी सुरु गरे र अरूले देख्न नसक्ने अवसरहरू हेर्नको लागि राम्रो आँखा छ।
इसाक १८ वर्षको उमेरदेखि एक सफल सम्पत्ति लगानीकर्ता हुनुहुन्छ र अहिले एक सफल सिकर्मी कम्पनीको सीईओ हुनुहुन्छ। इसाकसँग चीजहरूको आलोचना गर्ने र चीजहरूलाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्ने राम्रो क्षमता छ। उत्कृष्ट अर्थशास्त्रको अनुभव र आलोचनात्मक सोचका साथ इसाकलाई सफल व्यवसाय सञ्चालन गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ।
Oskar छिट्टै पूरा स्ट्याक विकासकर्ता समाप्त हुनेछ। वेबसाइटहरू, एपहरू र त्यसो गर्ने प्रक्रियामा आउने सबै कुराहरू सिर्जना गर्न र डिजाइन गर्नका लागि ओस्करसँग उत्कृष्ट आँखा छ। ओस्कर बैंकक प्लेटफर्मको डिजाइन प्रक्रिया सिर्जना गर्न र नेतृत्व गर्नको लागि उत्कृष्ट समर्थन हुनेछ।
मिरियन आलोचनात्मक र अन्तरदृष्टिपूर्ण मार्केटिङ सीपहरूको साथ टोलीको लागि उत्कृष्ट थप हो। Mirian ले Bancc को मार्केटिङ सेटअप, विकास र हेरचाह गर्नेछ। मिरियन अङ्ग्रेजी र स्प्यानिश दुवै धाराप्रवाह बोल्छिन् र उनको द्विभाषी सीपको साथ Bancc ले समर्थन, सामग्री र सोशल मिडियाको साथ अझ धेरै प्रयोगकर्ताहरूसम्म पुग्न सक्छ।
TC-Crypto सँग टेलिकम उद्योगमा नेटवर्क मर्मत र सेटअपको लामो अनुभव छ। TC-Crypto पहिलो दिनदेखि शाब्दिक रूपमा हामीसँग छ र उहाँ यस परियोजनाको लागि उत्सुक र धेरै उत्साहित हुनुहुन्छ। हामी ब्लकचेनको थप हार्डवेयर/सफ्टवेयर भागको लागि उहाँको ज्ञान र सीपहरूको साथ ठूलो सम्भावना देख्छौं।
निकसँग क्रिप्टो र ब्याङ्कको लागि ठूलो उत्साह छ। मार्केटिङ र साझेदारी मा आफ्नो विगत ज्ञान संग। निकले मार्केटिङ समन्वयको माध्यमबाट परियोजनाको बारेमा सचेतना फैलाउन र ठूलो साझेदारी सम्भावनाहरू खोज्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछन्।
रजा एक उत्कृष्ट लेख लेखक हुनुहुन्छ र क्रिप्टोकरेन्सीलाई यति धेरै माया गर्नुहुन्छ कि उनले यसको बारेमा लेख्न थाले। पाकिस्तानमा आधारित, रजा Bancc को लागि पहिलो प्रमुख लेखक हुनेछन्, समुदाय र सामाजिक मिडियालाई आगामी रोमाञ्चक चीजहरूको बारेमा अपडेट गर्दै!
सामेल हुन र साप्ताहिक AMA सत्रहरूमा भाग लिन निश्चित गर्नुहोस्!
Bancc™️ कसरी Crypto.com, Binance आदिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ?
प्रत्येक सफल कम्पनी पछाडिको मूल विचार पक्कै पनि नाफामा केन्द्रित छ। Bancc™️ र यी कम्पनीहरू बीचको मुख्य भिन्नता यो हो कि यी कम्पनीहरूले आफ्ना शेयरधारकहरूका लागि सकेसम्म उच्च आम्दानी गर्न चाहन्छन् र तिनीहरूको मान्यकर्ताहरूलाई तिनीहरूको कम्पनी रणनीति र राजस्व मोडेल भित्र साझेदारको रूपमा हेरिन्छ। Bancc ले समान प्रकारको राजस्व मोडेल ल्याउँछ तर "सार्वजनिक" आँखाको लागि। Bancc को लागि कुल आम्दानी घटाउँदै र ब्लकचेनमा सहभागीहरूका लागि यसलाई बढाउँदै।
Bancc™️ यी सबै कुराहरू कसरी गर्न सक्छ?
टेक्नोलोजी विकासको एक चाखलाग्दो भाग हो र हामीले बिटकोइनसँग देख्यौं, विशेष गरी पछिल्लो दशक। चीजहरू पहिले भन्दा ठूलो गतिमा विकसित हुन थालेका छन्। टेक्नोलोजी सबैका लागि उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने विश्वासमा बैंकको स्थापना भएको थियो र प्रयोगकर्ताहरूलाई अन्तरक्रिया गर्न गाह्रो बनाउनु हामीले सही हो भन्ने बाटो होइन। स्थिरता र विकासको लागि ठाउँ देखाउने अघिल्लो इतिहास भएका विद्यमान प्रविधिहरू जडान गरेर Bancc™️ ले नियमित बैंकिङ उपकरणहरू र क्रिप्टोकरेन्सी वातावरणबीचको खाडललाई कम गर्न सक्षम हुनेछ।
किन Bancc आवश्यक छ?
संसार परिवर्तन हुँदैछ र cryptocurrency यहाँ रहन को लागी छ। केवल एउटा कुरा, शुल्क। उदाहरणका लागि रेमिटेन्स सेवाहरू प्रयोग गर्ने सामान्य प्रयोगकर्ताहरूलाई हेर्ने हो भने। शुल्क केही हदसम्म एउटै कुरा हो। कोही पनि सित्तैमा काम गर्न चाहँदैनन् तर उच्च शुल्क चार्ज गर्दा नेटवर्कको सम्भावित वृद्धिलाई हानि पुर्‍याउँछ। 10$ मूल्यको पठाउन प्राइम टाइममा 60$ खर्च हुनु हुँदैन। सर्वसाधारणलाई आज उपलब्ध गराइएका सेवाहरू भन्दा सस्तो र प्रयोग गर्न सजिलो हुने कुराको आवश्यकता पर्नेछ। Bancc™️ ले यो समस्यालाई विकेन्द्रीकृत तरिकाले एक स्वस्थ र दिगो अर्थतन्त्र सिर्जना गरी समाधान गर्छ जुन एकल भागमा मात्र नभई नेटवर्कमा रहेका सम्पूर्ण प्रयोगकर्ताहरूमा निर्भर रहन्छ।
आज न्यूजलेटरको सदस्यता लिनुहोस्।
Bancc मा भइरहेको कुराहरूमा सधैं अपडेट रहन सुनिश्चित गर्नुहोस्, त्यहाँ हुनुहोस् वा वर्ग हुनुहोस्।
साइन अप गरेर, तपाईं हाम्रो कुरामा सहमत हुनुहुन्छ सर्त र सेवाहरू।
प्रतिलिपि अधिकार © 2022 Bancc™️ | Bancc™️⚡️ द्वारा संचालित
स्मार्ट अनुबंध जानकारी
टोकन नाम - Bancc
पुरस्कार टोकन - BTC
बाइब्याक शुल्क – ०% (म्यानुअल बर्न्स)
प्रतिबिम्ब शुल्क – ७%
मार्केटिङ शुल्क – १%
कुल शुल्क – १०%
दशमलव: १ 9